GMDQ oo diiwaangaliyay 6 xibsi siyaasadeed oo cusub. -
GMDQ oo diiwaangaliyay 6 xibsi siyaasadeed oo cusub. –
Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Qaran ayaa shahaadooyin ku-meel-gaar ah guddoonsiiyey Lix (6) Xisbi oo cusub oo ka mid noqon doona xisbiyada sida ku-meel-gaarka ah u diiwaan-gashan.
Munaasabada shahaadooyinka lagu guddoonsiiyey xisbiyada cusub ayaa ka dhacday xarrunta dhexe ee GMDQ ee Magaalada Muqdisho maanta oo taariikhdu tahay 7/10/2020.
Xisbiyada la diiwaan-geliyey ayaa kala ah:1. Xisbiga Amniga iyo Cadaaladda.2. Xisbiga Qaransoor3. Xisbiga Cadaaladda iyo Dib U heshiisiinta4. Xisbiga Jamhuuriga Soomaliyeed5. Xisbiga Cagaaran ee Soomaaliyeed6. Xisbiga Nabadda iyo Midnimada
Xiddigaha Ugu Goolasha Badan Yurub Ilaa Haatan, Ronaldo Iyo
Waa Kuwan LABADA Xiddig Ee Man United Ka Tirsan Ee Uu Jose